Saraakiil ka socota AMISOM oo gaaray Muqdisho iyo xogo laga helayo - Awdinle Online
Saraakiil ka socota AMISOM oo gaaray Muqdisho iyo xogo laga helayo
Magaaladda Muqdisho ee caasimadda wadanka waxaa soo gaaray 147 sarkaakiil Boolis ah oo dowladda Ghana u soo dirtay Soomaaliya, si ay uga mid noqdaan howlgalka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM) ee Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa lagu sheegay in ay ka caawinayaan booliska Soomaaliya ilaalinta nabadda iyo kala dambeynta gaar ahaan deegaanadda maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya.
War ka soo baxay Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadaasi ay soo gaareen magaaladda Muqdisho isla markaana lagayn doono magaaladda Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Koofur Galbeed Soomaaliya.
“AMISOM maanta waxaa soo gaaray Qeybta Booliska ee Ghana oo ka kooban 147 shaqaale oo la geyn doono Baydhabo ,Saraakiisha cusub ayaa door muhiim ah ka qaadan doona sugida amniga doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya, iyaga oo ay wehelinayaan dhiggooda Booliska Soomaaliya ee maamulka Koofur Galbeed” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay AMISOM.
Agaasimaha, Waaxda Xiriirka Caalamiga ah, ahna Kaaliyaha Taliyaha Booliska, Mr. Baba Saanid Adamu ayaa saraakiisha ka hor intaysan dhoofin, wuxuu kula taliyay inay ahaadaan kuwa xirfad ku leh waajibaadkooda nabad ilaalinta.
Ciidamo badan oo ka tirsan AMISOM ayaa ku sugan Soomaaliya waxaana qorshuhu yahay in ciidanka AMISOM ka baxaan Soomaaliya sanadka 2021, ciidanka amaanka Soomaaliyana la wareegaan masuuliyada amaanka dalka inkastoo aysan muuqan dhaqangalka qorshahaas.
Previous articleShil khasaaro geystay oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleNn ku guuleystay doorashada ka socota Mareykanka oo u dhintay COVID-19